Akụkọ - Ihe kpatara eji egosipụta kaadiboodu
Ọtụtụ ndị nwere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na-eji ihe ngosi osisi iji gosipụta ngwaahịa ha, mana iji kaadiboodu ngosipụta na-ewu ewu.
Ga-ahụ nkwupụta ngosi kaadiboodu na shelf a na-eji n'oge azụmahịa na ọbụna n'èzí ụlọ ahịa dị iche iche dị ka isi nzụta (POP). Ọ bụrụ na ị na-emepe ụlọ ahịa mkpọsa ma na-atụgharị uche maka ụdị ụdị ihe ngosi ị kwesịrị iji, lee ọtụtụ ihe mere ị ga-eji tụlee iji katọn pop ngosipụta n'elu osisi: otutu ihe. Nwere ike ịtụ ihe ngosi kaadiboodu na ụdị na nha na ọbụlagodi itinye ihe ọ bụla ịchọrọ ịchọrọ n'enweghị nsogbu. Tụle na kaadiboodu corrugated bụ ihe eji eme mgbanwe dị ukwuu, enwere ike ịme gị ka ọ dabaa na ihe ị chọrọ ozugbo n'oge kachasị dị mkpirikpi. Ọ bụ ezie na enwere ike ịme osisi n'ọtụtụ nha dịgasị iche iche, usoro a na-enweta naanị na tiori dịka igwe ọ bụla ga-adị mkpa iji belata ngwaahịa ikpeazụ. Usoro mmepụta abụghị naanị ihe siri ike kama ọ dịkwa oke ọnụ.
Ọ bụ Portable ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe layout na ọdịdị nke gị ahịa site na-akpụ akpụ ihe gburugburu, i nwere ike ime otú naanị ebe corrugated ngosipụta bụ ìhè na ibughari. Mgbe ị nwere ngosipụta osisi, ịkwesịrị ịnwe enyemaka mgbe ọ bụla ịchọrọ ịgbanwe usoro ụlọ ahịa gị. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ngosipụta ngosipụta dị n'elu Abbotsford BC nwere ike nwee ike ịpịgharịa, ị nwere ike ịchekwa ha ma ọ bụ weta ha na ọnọdụ ndị ọzọ maka nkwalite ma ọ bụ ngosi ụzọ.
Ọ dị ọnụ ala Dị ka onye nwe azụmaahịa ọhụụ ọhụrụ, ị gaghị enwe ike imefu nnukwu ego na mmalite. Chegodi otu ogwe osisi ga-efu ma mụbaa nke ahụ na ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi ma ọ bụ guzoro ebe ị ga-achọ. Ngosipụta ngosipụta dị elu na Abbotsford BC dị ọnụ ala ma nye ya na ọ nwere ike ịnye ihe niile onyinye ngosi osisi nwere ike ịnye, iji ya ga-abụ nhọrọ kachasị ọnụ ahịa. Ọ bụ Mgbanwe Younwere ike ịgbanwe ngwa ngwa nke kaadiboodu iji kwado isiokwu nke ụlọ ahịa gị maka oge ụfọdụ ọbụlagodi na enweghị enyemaka ọkachamara. Ka ihe atụ, n'oge lentpo ụbọchị ire, i nwere ike ekpuchi niile gị ngosi guzoro na-acha ọbara ọbara akwụkwọ ma ọ bụ tinye graphic obi aghụghọ ona oge. Y’oburu n’eji ihe ngosi osisi, igbanwe ha putara igo ndi oru enyemaka na imefu nnukwu ego.
Nyere ọtụtụ elele anya dị n’elu, ị nwere ike ịgwa ngwa ngwa etu kaadiboodu ngosipụta ga - esi baa uru maka azụmaahịa gị. Chee echiche banyere ihe ndị a niile ka ị na-eme mkpebi, ka ị ghara inwe ụta na njedebe.